शिक्षाको विकल्प : अग्रज शिक्षण | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
शिक्षाको विकल्प : अग्रज शिक्षण
२०७७ भाद्र १९, शुक्रबार ०८:५६ गते
कोरोनाको कहर जति लम्बिँदो छ उति नै जिन्दगी तबाह पनि हुँदो छ र शैक्षिक अन्योलतारुपी ग्राफ पनि उत्तिकै गतिमा बढ्दो छ । फलतः लाखौँ बालबालिका झनै द्विविधा र तनावमा परेका छन् । सरकार शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिने भनिरहेछ, तर ऊसँग पनि त्यस्तो बलियो योजना र कार्यक्रमहरु छैनन् । विज्ञहरु पनि विभिन्न उपायहरु सुझाइरहेछन्, तर ती उपायहरु त्यति व्यावहारिक र न्यायमूलक हुने लागिरहेको छैन । यसअघि सरकारले विद्यालय तहको भर्ना सार्दै सार्दै भदौ १ गतेबाट गर्ने उद्घोष गरे पनि कोरोनाको कहर झन् जनस्तरसम्म बढ्दै गएको देखेपछि सरकारले उक्त कार्यक्रम फिर्ता लियो । त्रिविले भाद्रमा गर्ने भनी उद्घोष गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रम अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि फिर्ता लिएको सूचना जारी ग¥यो ।
सेमेष्टर अन्तर्गतका दोस्रो, तेस्रो आदि सेमेष्टर अध्ययन गरिरहेकाहरुलाई पछि परीक्षा लिने गरी माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गरेअनुरुप अहिले ती सेमेष्टर तहका कक्षाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसको प्रभावकारिता जस्तो रहला वा जति रहला त्यो आप्mनो ठाउँमा छ । तर, कक्षा चल्नु र हुनु भनेको मरूभूमिमा वृष्टि हुनुजस्तै वा चिसो पानीको जरूवा देख्नुजस्तै हो ।
कला, व्यवस्थापन, शिक्षा आदि संकायका कतिपय तहका दोस्रो वर्षमा पढिरहेकाहरुलाई तेस्रो र तेस्रोलाई चौँथो वर्षका कक्षाहरुमा प्रवृत्त गराउन भनिएको देखिन्छ । कतिपय क्याम्पस, कलेजहरुले कक्षा १२ को अनलाइनबाट नै कक्षारम्भ गरिसकेका छन् । कक्षा १० को रिजल्ट प्राप्त भइसकेकाले अब शैक्षिक संस्थाहरुले क्रमिकरुपमा अनलाइन फाराम भराउने र अनलाइनका माध्यमबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । यसर्थ, संस्थाहरुले जुन किसिमको प्रयत्न गरिरहेछन् तिनले शिक्षणलाई जीवन्त बनाउने प्रयत्न गरिरहेको यथार्थ लुक्न सक्दैन ।
संस्कृत विषयको अघिल्ला कक्षाकाले साना कक्षालाई शिक्षण गर्ने परम्परा अनादि कालदेखि चल्दै आएको छ । गुरू एक हुने तर विद्यार्थी विभिन्न कक्षाका हुने र तिनमा पनि विभिन्न क्षमताका हुने हुँदा तिनलाई माथिल्लो पाठ भएका विद्यार्थीले सिकाउने गर्दा सिकाइ सरल, सहज र सुबोध बन्ने गरेको स्वयं यो पंक्तिकार पनि भुक्तभोगी छ ।
समुदायका कतिपय घरमा घरका बुज्रुक सदस्यहरु शिक्षित हुन्छन् । कतिपयमा ठूला बुज्रुक शिक्षित नभए पनि दाजुभाइ शिक्षित हुन सक्छन् । त्यहाँ काकाकाकी, दाजुदिदीहरु पनि शिक्षित हुन्छन् । त्यहाँ ठूलाले सानालाई सिकाउन सकिने परिस्थिति विद्यमान रहन सक्तछ । सानाले ठूलालाई सिकाउने गर्दा कसरी सजिलै सिक्न र सिकाउन सकिन्छ भन्ने युक्ति उनीहरुलाई जानकारी हुने नै भयो । साथसाथै अरुलाई सिकाउँदा सिकेका र जानेका कुरा चिरस्थायी हुन मद्दत पुग्छ । पुराना जानेका विषय र सन्दर्भहरु पुनः अद्यावधिक हुँदा र सँगसँगै सिकाउने खुबी र कौशलमा आत्मविश्वाससमेत थपिँदा भोलि एउटा कुशल दक्ष शिक्षक बन्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ नै ।
यसर्थ, घरमा पनि मातापिता सुशिक्षित भए पनि सकभर ठूला कक्षाकालाई पढाउन प्रेरित गर्नु धेरै दृष्टिले प्रभावकारी हुने देखिएको छ । हो, ठूला बुज्रुक सदस्यले उसले सिकाइरहँदा उसकै छेउमा बसिदिने, उसले प्रभावकारी ढङ्गमा सिकाउन नजाने यसरी सिकाउन भनेर बताइदिने गर्दा सिक्ने र सिकाउने दुवैलाई लाभ हुन्छ । सिकाइ प्रक्रिया मिलिरहेको छ भन्ने अनुभूति हुँदा सिकाउने ठूला कक्षाका बच्चामा पनि आत्मविश्वास पनि बढेर जान्छ । उसले भाइबहिनी पढाउने आप्mनो दायित्व भएको अवगत गर्दछ । साथैसाथै आपूmमा व्यावहारिक परिपक्वता अनुभूत गरेर ऊ एउटा सज्जनतायुक्त चरित्रवान् नागरिक बन्नमा पनि सघाउ पुग्दछ । सहशिक्षाका अतिरिक्त यसैले अग्रज शिक्षण पद्धति सिकारूका निम्ति त लाभदायी हुन्छ नै, सिकाउनेका निम्ति पनि यो मृतसञ्जीवनीको काम गर्ने प्रकृतिको पनि देखिन्छ ।
घरमा त्यस्तो परिवेश नभए केही अपवादलाई छाडेर हेर्दा छिमेकमा अग्रज कक्षाका दाजुदिदीहरु हुन्छन् । उनीहरुले साना कक्षाका भाइबहिनीलाई पढाइदिन सक्तछन् । उनीहरु उमेर र सिकाइ क्षमताका दृष्टिले पनि परिपक्व र समझदार पनि हुन्छन्, तिनलाई अझ माथिल्ला ११÷१२ कक्षाकाले सिकाइदिने, तिनले अनलाइनबाट पनि पढ्न र बुझ्न पनि सक्छन् । र, उनीहरुलाई पढाइको रस पनि बसेको हुँदा सिकाइ सहज पनि हुन सक्तछ । उनीहरुले विभिन्न माध्यमबाट शिक्षकसँग सम्पर्क गरेर नजानेका विषय र सन्दर्भमा जान्न र बुभ्mन सक्छन् । उनीहरुलाई महाविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका अग्रजले सघाउन सक्छन् ।
त्यसो त, सामाजिक जीवनमा विभिन्न विषय अध्यापन गरिरहेका शिक्षक पनि हुन्छन् । कोही निवृत्त शिक्षक पनि हुन सक्छन् उनीहरुले पनि त्यहाँ अग्रज विद्यार्थीहरुलाई सिकाइमा सघाउन सक्छन् । उनीहरुका कक्षाका विषयगत समस्या समाधान गर्न पनि उनीहरु सहायक बन्न सक्छन् । उनीहरुले नै आपूmले सिकाइरहेका भाइबहिनीहरुलाई अनौपचारिक लयमा नै भए पनि परीक्षा लिने र कपी परीक्षण गरी सिकाइको मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन गर्न पनि सक्छन् । उनीहरुले प्रदान गरेका नतिजालाई अभिलेखीकरण गरी राख्ने र आवश्यक पर्दा शैक्षिक संस्था र निकायहरुमा दाखिल गर्न सक्छन् ।
उनीहरुलाई सक्रिय बनाउन सम्भव भएका ठाउँमा स्वयं विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकले त्यस्तो समूह बनाइदिने र प्रधानाध्यापक र शिक्षक सम्भव नरहेका क्षेत्रमा उनीहरुसँगको सम्पर्क र सहकार्यमा स्वयं अभिभावकहरुले अग्रसरता लिने र सिकाइको वातावरण बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यो कसरी पनि सम्भव छ भने केही अपवादलाई छाडेर हेर्दा प्रायः सबै विद्यार्थीहरुकहाँ पुस्तक पुगिसकेको छ । कतिपय स्थानमा शिक्षक स्वयं घरघर र टोलटोल पुगेर गृहकार्य दिइसकेको स्थिति छ । विद्यालयमा विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पञ्जीकृत नभए पनि विद्यालयमा गत शैक्षिक वर्षमा उसले हाँसिल गरेको उत्तीर्णता या अनुत्तीर्णताको अभिलेखले र पुस्तक लगेको अभिलेखले पनि विद्यार्थी कति कक्षामा छन् र उनीहरु अहिले केकस्ता कार्यमा सक्रिय छन् भन्ने सहज हुने भएकाले पनि स्वतः विद्यालय उनीहरुका सिकाइको क्रमिक अभिलेखीकरण भइरहेको हुन्छ ।
त्यस्तो अग्रज शिक्षामा भइरहेका कार्य र प्रगतिबारे शिक्षक र स्वयं प्रधानाध्यापक जोडिरहने भएकाले उनीहरुले हासिल गरिरहेका शैक्षणिक प्राप्ति र उपलब्धिहरुको लेखाजोखा गर्न दुरूह पनि हुँदैन । जहाँ भौगोलिक विकटता र दूरता छ त्यहाँ अभिभावक, निवृत्त शिक्षक र अग्रज छात्र–शिक्षकले दिएका कार्यप्रगतिलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था जीवितै रहेको हुन्छ । यसले अनलाइन शिक्षाको विकल्प दिन सक्छ । सहरको घना टोलदेखि विकट भूभागमा रहेका बालबालिकाहरुलाई पनि सिकाइसँग जोड्नमा कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन ।
यहाँ शिक्षकबाटै नसिकेसम्म सिकाइ कसरी परिपक्व, वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय र वैध बन्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । स्मरणीय कुरा के छ भने कसले सिकाए भन्दा पनि विषय र तहले राखेका लक्षित सिकाइ उपलब्धि प्राप्त भयो÷भएन भन्नेचाहिँ मह¤वपूर्ण प्रश्न हो, त्यो प्राप्त हुन सकेमा कसले सिकाए भन्ने प्रश्न स्वतः गौण बन्न जान्छ । फेरि शैक्षिक दृष्टिले पनि यो सङ्कटापन्न घडी हो । यसबेला आपूm र परिवार हुँदै समाज र मुलुक सुरक्षित रहँदै सिक्न सक्नुचाहिँ प्रधान भएकाले सिकाउने व्यक्तिका कुरा स्वतः गौण कुरा हो ।
सम्भव भएका ठाउँमा विषयअनुरुप विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमूलक कार्यमा क्रियाशील बनाई त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन पनि सकिन्छ । जस्तोः सामाजिक विषयमा कक्षा हेरी तिम्रो गाउँमा कुन–कुन जाति र समुदायका मानिस बस्छन् ? उनीहरु कति–कति छन् ? तपाईंका समाजमा कुन–कुन पेसा अँगालेका मानिस बस्छन् ? स्वास्थ्य शिक्षामा तपाईंको गाउँमा कति–कति दिनमा बाटो, मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदिको सरसफाइ गरिन्छ ? नेपालीमा तपाईंका गाउँमा साहित्यकार भए तिनको जीवनी लेखेर ल्याऊ । गणितमा तपाईंका घरको आयातन निकालेर ल्याउनुहोस् । कतिवटा कोठा छन् तिनको आयातन पहिल्याउनुहोस् । तपाईंको घरमा कति आय र खर्च हुन्छ ? यस्ता खाले मौलिक प्रश्नहरुले विद्यार्थीमा सिर्जनशील क्षमताको विकास गर्नमा सघाउ पुग्दछ ।
सम्भव भएका ठाउँमा शिक्षकबाट सञ्चालित टोल शिक्षा र शिक्षकबाट सञ्चालित समूहगत सिकाइ, रेडियो शिक्षण आदि विधि र पद्धतिहरु पनि प्रभावकारी हुन्छन् । अझ सहपाठी शिक्षण विधिलाई पनि सँगै जोड्न सक्दा त्यो पनि अग्रज शिक्षणजत्तिकै प्रभावकारी बन्न सक्छ । गुरूबाट पढिएको पाठ लगाइदिँदा सिकाइ सबल र चिरस्मरणीय बन्न सक्छ । यसर्थ, यो विषम परिस्थितिमा अग्रज शिक्षण, सहपाठी शिक्षण, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण, टोल शिक्षण, गृहकार्य प्रदान र परीक्षण, रेडियो शिक्षण पनि सिकाइका निम्ति वरदान साबित हुन सक्छ । वर्तमानमा अनलाइन शिक्षण गर्न सकिने पूर्वाधार तयार भइसकेका क्षेत्रमा सरकारले अनलाइन सेवा सर्वसुलभ बनाउन र कतिपय कमजोर आय, आम्दानी भएका अतिविपन्न वर्गका सीमित मानिसहरु मात्र हुनसक्छन्, त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरी साधन, सुविधा उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ गर्न सकिने वातावरण बन्न सक्तछ ।